Zvinonyadzisira zvipfeko upenyu hwepabonde hwemhuri. Homer naMarge muna 2018 gore
Zvinonyadzisira zvinokonzera mifananidzo
American comics porn simpsons 30 seasons, mhuri yakakurumbira inotora TV zviratidzo 25 makore. Tarisa murume waHomer aishanda nesimba, ane hanya nevechidiki vechidiki veimba, Marge, mudzidzi anoremekedzwa asingatauri pachikoro chaLisa, mwanakomana waBarth anonyangadza muzvifananidzo zvinonyadzisira.
kuru > The Simpsons
Ihwo hukama hunova hwakaoma, hukama hwekubatana. Zvakakosha kuongorora mushure mekutarisa pfungwa dzepabonde. Zviitiko zvekaroto zvinowanikwa pedyo neTV iri pamubhedha. Mumufananidzo wemifananidzo inovaraidza, vanhu vemuzvikamu, vatinodzidza navo, mhuri, vashandi, vanoshanda navo vanotora chikamu. Vanorarama muguta racho, zita rinonzi sonorous is Springfield. Chibvumirano ichi naamai vemushamwari ndiMilhouse.
Hanya simpsons - adventures
Ment yeSimpsons ine zvepabonde
Masangano emabhadharo anowanikwa muIndaneti
Zvichenese iko ikozvino mumamiriro ezvinhu euchiva chinodhaka pamwe chete nemhare dzeCleveland's show. Vagari veSpanish vanoziva zvose pamusoro pehutano hwemhando dzakasiyana-siyana, vanoronga mukukudza iye mapoka echecherous. Unakidzwa nevhidhiyo yakanakisisa yepaIndaneti kune vanhu vakuru, iwe uchashamiswa nemvura yakawanda ye-eros-zvikamu uye ichafukidza nehupenyu hwekunzwa!
Iwe unoda here kuita zvepabonde nenzira iyo makateti anozvikumbira, anozivikanwa nokuda kwezvakanaka zvadzo? Cherechedza semunhu mukuru muzhik ane nhengo dzemhuka dzine musikana asina kuzvidzivirira mumakomba maviri, zvinonakidza kwazvo! Inopisa kupisa kwekunaka kwekunaka, hutano hwepabonde hwemusikana akanaka kwazvo hwakadzimwa hwakadzimwa.
Musikana ane mwero, mudzidzi akakurumbira wechikoro chesekondari akasarudza nzira kubva-panzira. Iyi nguva yekutendeuka yakamanikidza musikana Lisa kuti ashandise kutarisa kune hukama hwepedyo, kutumira kusanzwisisa kwake nenzira yekutsvaga varume, kukohwa michero yekukunda.
Bart maitiro akaipa
Mudiki wechidiki ave achitarisa zviito zvaamai vake. Tsika dzakaipa dzinokonzera Marge kuda nekudanana zvakagadzikana kuva hukama hwakakomba hwepabonde. Murume anogara akabatikana mubasa, zvisingafungidziri kufungidzira zviri kuitika.
Mavambo ekutanga ekuvhura kwezuva kuMarge aireva mahomoni ekurara asingadzorwi akadzivirira kurara. Homer akare zvishoma mafuta haagoni kugutsa zvido zvepabonde zvemudzimai wake wechidiki, kumumanikidza kuti achinje nemwanakomana wake.
Inovanza kuvhiringidzwa kwevechidiki vechidiki chepakutanga kwekaroto. Nzendo dzomumwe wako, rega asingarangwi kuita zvishuvo zvepabonde zvakavanzika, zvakarongedzwa usiku. Mumwe musikana akafuka zvitsitsinho, jira rakapfupi, ruvara rwekvudzi runokwezva vafambi-ne. Upenyu hwehupenyu hwemhare hunotaridzika hutai hunoratidzirwa mumamiriro akasiyana-siyana, kutengesa mazwi, kunodzidzisa mutarisiri wekutaurirana kunotungamirira kune zvepabonde zvepabonde, zvakasarudzwa mazwi - kiyi yekubudirira nguva dzekurara. Madzimai evanhukadzi zvepabonde anosarudza mifananidzo yehupombwe, kunyanya kwevanyori-kunofadza kuona maitiro, tenda ini, nhamba yezvigaro zvinoshamisika zvikuru zvichipiwa firikiti chaiyo yemafambiro emuviri. Nhengo dzepabonde dzeSimpson dzakawedzerwa, mazamu ehafu yevakadzi, nhengo dzevarimi, maitiro akawirirana akabatanidzwa, akabatanidzwa mumufananidzo, kugadziridzwa kwakaitwa paIndaneti, katatu hukuru.